စက်ရုပ်တွေက လူသားတွေရဲ့ ဘယ်အလုပ်အကိုင်တွေကို ဘယ်အချိန်မှာ လုယူမလဲ ? – DigitalTimes.com.mm
263 Shares 202 Views
စက်ရုပ်တွေက လူသားတွေရဲ့ ဘယ်အလုပ်အကိုင်တွေကို ဘယ်အချိန်မှာ လုယူမလဲ ?
Ko Thuya Jun 13, 2018
၂၀၂၇ ခုနှစ်မှာ လူသားတွေ ကားမောင်းတာကို မြင်ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ၂၀၅၃ ခုနှစ်ရောက်ရင်တော့ စက်ရုပ်ဆရာဝန်တွေက ခွဲစိတ်ခြင်းလို ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်များကိုတောင် လုပ်နိုင်တော့မှာပါ။ Oxford နဲ့ Yale တက္ကသိုလ်မှ သုတေသနပညာရှင်များရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အရ ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာက နှစ်အလိုက် လုယူမယ့် လူသား အလုပ်အကိုင်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ လာမယ့် နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်းမှာ လူသား အလုပ်အကိုင်ပေါင်းများစွာကို စက်ရုပ်တွေက လုယူမယ်လို့ အဖြေထွက်လာပါတယ်။
သူတို့က စက်ရုပ်တွေ နှစ်အလိုက် လုယူမယ့် လူသား အလုပ်များနဲ့ ပတ်သက်၍ သဘောထား အမြင်များကို ဥာဏ်ရည်တု သုတေသနပညာရှင်ပေါင်း ၃၅၂ ယောက်ကို မေးမြန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနကို ဦးဆောင်သူ Katja Grace နဲ့ အပေါင်းပါများက လာမယ့် ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ စက်ရုပ်တွေဖြင့် အစားထိုးမယ့် အလုပ်များမှာ Mechanical နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ အလုပ်များဖြစ်တယ်လို့ တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
လာမယ့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ စက်ရုပ်များက အ၀တ်ခေါက် ကျွမ်းကျင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတောင် အ၀တ်ခေါက်ပေးတဲ့ စက်များ ပေါ်နေပါပြီ။ စက်ရုပ်တွေဟာ ၂၀၂၄ ခုနှစ်မှာ လူသားတွေထက် ဘာသာပြန်စွမ်းရည် ပိုမို ကောင်းမွန်လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်မှာ အထက်တန်းကျောင်းသား အဆင့် Essay များကို စက်ရုပ်တွေက ရေးနိုင်လာပြီး အဲဒီခုနှစ် စွန်းစွန်းလောက်မှာ ပေါက်မယ့် ထိပ်တန်း ပေါ့ပ် သီချင်း ၄၀ ကို ရေးသားလာနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၃၆ ခုနှစ်မှာ စက်ရုပ်တွေက အရောင်းဝန်ထမ်း အဖြစ်ပါ အလုပ်လုပ်နိုင်လာမှာပါ။
စာရေးခြင်းနဲ့ အဆင့်မြင့် သင်္ချာများ တွက်ချက်ခြင်းလို ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး တီထွင်ဖန်တီးရတဲ့ အလုပ်များကိုတော့ စက်ရုပ်များ လုပ်နိုင်ဖို့ အချိန်အတော်ကြာဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနပညာရှင်များက ၂၀၅၁ ခုနှစ်ရောက်ရင် လူသားတွေရဲ့ နေ့စဉ် အလုပ် အားလုံးကို ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာက ပြုလုပ်နိုင်ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၁၃၆ ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ လူသားတွေရဲ့ အလုပ်အကိုင် အားလုံးကို စက်ရုပ်တွေက လုယူတော့မှာပါ။
“ ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာ မြင့်မားလာခြင်းက ကျန်းမာရေး၊ သိပ္ပံပညာ၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကို အသွင်ပြောင်းခြင်းဖြင့် ခေတ်သစ် လူနေမှုဘ၀ကို ပံ့ပိုးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရလဒ်များကို အခြေခံပြီး သုတေသေနပညာရှင်များနဲ့ မူဝါဒ ချမှတ်သူများက ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာရဲ့ Trends များကို စီမံခန့်ခွဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ လို့ သုတေသနပညာရှင်များက ရေးသားထားပါတယ်။
စကျရုပျတှကေ လူသားတှရေဲ့ ဘယျအလုပျအကိုငျတှကေို ဘယျအခြိနျမှာ လုယူမလဲ ?
၂၀၂၇ ခုနှဈမှာ လူသားတှေ ကားမောငျးတာကို မွငျရမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။ ၂၀၅၃ ခုနှဈရောကျရငျတော့ စကျရုပျဆရာဝနျတှကေ ခှဲစိတျခွငျးလို ခကျခဲတဲ့ အလုပျမြားကိုတောငျ လုပျနိုငျတော့မှာပါ။ Oxford နဲ့ Yale တက်ကသိုလျမှ သုတသေနပညာရှငျမြားရဲ့ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြ အရ ဉာဏျရညျတု နညျးပညာက နှဈအလိုကျ လုယူမယျ့ လူသား အလုပျအကိုငျမြားကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။ လာမယျ့ နှဈပေါငျး ၅၀ အတှငျးမှာ လူသား အလုပျအကိုငျပေါငျးမြားစှာကို စကျရုပျတှကေ လုယူမယျလို့ အဖွထှေကျလာပါတယျ။
သူတို့က စကျရုပျတှေ နှဈအလိုကျ လုယူမယျ့ လူသား အလုပျမြားနဲ့ ပတျသကျ၍ သဘောထား အမွငျမြားကို ဉာဏျရညျတု သုတသေနပညာရှငျပေါငျး ၃၅၂ ယောကျကို မေးမွနျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သုတသေနကို ဦးဆောငျသူ Katja Grace နဲ့ အပေါငျးပါမြားက လာမယျ့ ၁၀ နှဈအတှငျးမှာ စကျရုပျတှဖွေငျ့ အစားထိုးမယျ့ အလုပျမြားမှာ Mechanical နဲ့ ပတျသကျနတေဲ့ အလုပျမြားဖွဈတယျလို့ တှခေဲ့ကွပါတယျ။
လာမယျ့ နှဈအနညျးငယျအတှငျးမှာ စကျရုပျမြားက အဝတျခေါကျ ကြှမျးကငျြလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတောငျ အဝတျခေါကျပေးတဲ့ စကျမြား ပျေါနပေါပွီ။ စကျရုပျတှဟော ၂၀၂၄ ခုနှဈမှာ လူသားတှထေကျ ဘာသာပွနျစှမျးရညျ ပိုမို ကောငျးမှနျလာကွမှာ ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၂၆ ခုနှဈမှာ အထကျတနျးကြောငျးသား အဆငျ့ Essay မြားကို စကျရုပျတှကေ ရေးနိုငျလာပွီး အဲဒီခုနှဈ စှနျးစှနျးလောကျမှာ ပေါကျမယျ့ ထိပျတနျး ပေါ့ပျ သီခငျြး ၄၀ ကို ရေးသားလာနိုငျကွမှာ ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၃၆ ခုနှဈမှာ စကျရုပျတှကေ အရောငျးဝနျထမျး အဖွဈပါ အလုပျလုပျနိုငျလာမှာပါ။
စာရေးခွငျးနဲ့ အဆငျ့မွငျ့ သင်ျခြာမြား တှကျခကျြခွငျးလို ပိုမိုရှုပျထှေးပွီး တီထှငျဖနျတီးရတဲ့ အလုပျမြားကိုတော့ စကျရုပျမြား လုပျနိုငျဖို့ အခြိနျအတျောကွာဦးမှာ ဖွဈပါတယျ။ သုတသေနပညာရှငျမြားက ၂၀၅၁ ခုနှဈရောကျရငျ လူသားတှရေဲ့ နစေ့ဉျ အလုပျ အားလုံးကို ဉာဏျရညျတု နညျးပညာက ပွုလုပျနိုငျပွီလို့ ဆိုပါတယျ။ ၂၁၃၆ ခုနှဈအရောကျမှာတော့ လူသားတှရေဲ့ အလုပျအကိုငျ အားလုံးကို စကျရုပျတှကေ လုယူတော့မှာပါ။
“ ဉာဏျရညျတု နညျးပညာ မွငျ့မားလာခွငျးက ကနျြးမာရေး၊ သိပ်ပံပညာ၊ စီးပှားရေး၊ စဈရေး၊ သယျယူပို့ဆောငျရေးမြားကို အသှငျပွောငျးခွငျးဖွငျ့ ခတျေသဈ လူနမှေုဘဝကို ပံ့ပိုးပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီရလဒျမြားကို အခွခေံပွီး သုတသေနေပညာရှငျမြားနဲ့ မူဝါဒ ခမြှတျသူမြားက ဉာဏျရညျတု နညျးပညာရဲ့ Trends မြားကို စီမံခနျ့ခှဲရမှာ ဖွဈပါတယျ။ “ လို့ သုတသေနပညာရှငျမြားက ရေးသားထားပါတယျ။
683 shares239 views
132 shares27 views
238 shares67 views